Kutaura kunonoka muvana | Bezzia
Kutaura kunonoka muvana
Maria Jose Roldan | 04/06/2021 23:14 | Zvemwanakomana wako
Chinhu chakaipisisa icho mubereki anogona kuita kuenzanisa mwana wavo nevamwe. Musoro wekutaura ndeumwe weavo vanogamuchira kuenzanisa kukuru uye ndekwekuti vabereki vazhinji havashiviriri nemashoko ekutanga emucheche.
Nezve mutauro, kusahadzika kwemarudzi ese kunomuka kunyanya izvo zvine chekuita nenguva iyo iyo mudiki yaanofanira kutanga kutaura uye kana paine chekushushikana kana akasazviita pane rimwe zera.
1 Mwana wese anoda nguva yake
2 Panguva ipi panogona kuve nedambudziko mukutaura kwemwana
3 Maitiro ekukurudzira kukura kwemutauro muvana
Mwana wese anoda nguva yake
Vabereki vanofanirwa kujekeswa kuti havazi vese vana vakaenzana uye munhu wese anoda nguva yake kana zvasvika pakudzidza mutauro. Ichokwadi kuti pane rimwe zera vana vese vanofanirwa kutaura pasina dambudziko uye kana zvisiri, mudiki anogona kutambura kunonoka mukuvandudzika kwekutaura.
Semitemo yakajairika, mwana anofanirwa kutaura mazwi ake ekutanga pazera regore. Pakazosvika mwedzi gumi nesere, mudiki anofanirwa kunge aine mazwi emazwi angasvika zana. Pakusvitsa zera ramakore maviri, dura remashoko rakasimbiswa zvakanyanya uye mwana anofanira kunge atove nemazwi anodarika mazana mashanu kana achitaura. Izvi zvakajairika, kunyangwe paine vana vanogona kuve nemazwi mashoma uye aine mashoma mazwi.
Panguva ipi panogona kuve nedambudziko mukutaura kwemwana
Zvingave kuti pane kumwe kunonoka mumutauro, mwana paanosvika makore maviri asingakwanise kubatanidza mazwi maviri. Kune zvimwe zviratidzo zvinogona kukunyevera kumatambudziko akakomba emutauro:
Pazera ramakore matatu mwana anoita manzwi ari oga asi haakwanise kutaura mamwe mazwi.
Hatigoni kubatanidza mazwi kugadzira mitsara.
Iyo haina kugona kududza uye anokwanisa chete kutevedzera.
Izvo zvakakosha kuratidza kune vabereki kuti mune dzakawanda zviitiko kunonoka kunowanzojairika pamusoro pemakore.
Maitiro ekukurudzira kukura kwemutauro muvana
Nyanzvi mumunda dzinopa zano vachiteedzera nhungamiro dzinoverengeka dzinobvumidza vana kukudziridza mutauro wavo zvakaringana uye nenzira kwayo:
Zvakanaka kuti vabereki vaverengere vana vavo nyaya kana mabhuku nenzira yakajairika.
Taura zvinonzwika zviito zvakasiyana zvinoitwa pamba.
Dzokorora mashoko ayo anoshandiswa pazuva nezuva.
Zvinokurudzirwa kupa imwe nguva kumitambo yekudzidzisa mumutauro upi kana kutaura zvine basa rekutanga.
Muchidimbu, nyaya yekutaura ndeimwe yeayo anowanzo kunetsa vabereki zvakanyanya. Kuona kuti vamwe vana vanokwanisa sei kutaura mazwi avo ekutanga pazera uye kuti mwana wako haataure, zvinoita kuti vabereki vazhinji vatye. Rangarira kuti mwana wega wega anoda nguva yake, saka unofanirwa kudzivirira kuenzanisa. Kune vana vazhinji vanononoka kana zvasvika pakutaura, asi pamusoro pemakore, mutauro wavo unowanzoitika uye vanokwanisa kutaura pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Zvemwanakomana wako » Kutaura kunonoka muvana
5 makiyi ekuchengetedza mhepo kutonhodza muzhizha rino
Zvitubu zvebindu, zvekushongedza uye zvekuzorora